Nearly 90000 Zimbabweans Arrested And Deported From South Africa - The Spy
Nearly 90000 Zimbabweans Arrested And Deported From South Africa
Over 89000 Zimbabweans have been arrested and deported from South Africa for entering or staying in that country without proper documentation.
Thousands of Zimbabweans flock into neighbouring South Africa and Botswana in search of jobs and better lives, Mutasa said.
“We have been talking about these issues as labour, as human rights activists that SADC and AU have to take a progressive and practical position on Zimbabwe crisis, we have got a crisis. SADC has to resolve this crisis before it degenerates and now it has degenerated. So SADC, South Africa and other Africa countries have to agree that Zimbabwe has got crisis,” said Mutasa adding;
Political analyst Wurayayi Zembe says undocumented Zimbabweans flocking into South Africa is confirmation that the Emmerson Mnangagwa government has failed.